पाथार्दीको बाख्राफार्म कृषकको आकर्षणस्थल बन्दै – osnepal tv
जिल्लाको भिमाद नगरपालिका–९ पाथार्दीका बाख्राफार्म पशुपालन कृषकका लागि अवलोकनस्थलका रूपमा विकास हँुदै गएको छ । उक्त क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रबाट बोयर जातको बाख्रा पाल्ने तरिका सिक्नका लागि प्रायः दैनिक पशुपालन कृषक अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् ।
विसं २०६४ देखि त्यस क्षेत्रका कृषकले बीउ तथा मासुका लागि बोयर बाख्रा उत्पादन गर्दै आएका छन् । बाख्रापालनमा राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि पाथर्दीबाट विदेशिएका युवासमेत गाउँमै फर्किएर बाख्रापालनतर्फ लाग्न थालेको वडाध्यक्ष इमानबहादुर थापाले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारी त्यागेर बाख्रापालनमा भविष्य देखेका युवामध्येका एक कृषक हुन् विनम आले । करिब पाँच वर्ष दक्षिण कोरियामा बिताउनुभएका आलेले यतिबेला गाउँमा बोयर बाख्रालगायतका कृषि पेशा गर्न थाल्नुभएको छ । “परिवारको साथमा बसेर गाउँमै राम्रो आम्दानी हुने भएपछि किन विदेश जानू ? विदेशमा कमाएको पैसा गाउँमै कमाउन सकिने सम्भावना देखेर गाउँ फर्किएको हुँ”, उहाँले भन्नुभयो । आलेले ३०० कुखुरा र करिब ३५ वटा माउसहितको बोयर बाख्रा राखेर पाल्न शुरु गर्नभएको छ ।
Previous article गोसाइँकुण्डको धार्मिकमार्गमा खानाको मूल्यदर कायम
Next article दुर्गमका सांसद्को आक्रोश : १० नबजी घाम लाग्दैन, घाम नलागी टावर आउँदैन, साँझ बिहान कसरी टेलिफोन गर्ने ?
शारिरीक अनि मानसिक तनाव कम गर्न यो निकै फलदायी हुन्छ फिटकिरी, यस्ता छन् अन्य अचुक फाइदाहरु
सचिनका बाबुको नराम्रो ब्यबहार देखेर सबैले गरे आलोचना, लाइभ अन्तरवार्तामा नै सचिनसँग झगडा परेको भिडियो भाइरल, बाबु भएर नाबालक छोरालाई के गरेको ?